Sunday November 15, 2020 - 11:04:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa beenisay hadal kasoo baxay dawladda Federaalka Itoobiya kaas oo ay ku sheegatay in ciidamadeedu qabteen xubno ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dawladda Itoobiya ayaa war ay soo saartay maalintii sabtida ee shalay waxay ku sheegtay in ragga ay qabatay ay qorshaynayeen weeraro ay ka gaystaan magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale ee Itoobiya.
Balse Afhayeenka ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo la hadlay Shabakada Wararka SomaliMeMo ayaa gaashaanka u daruuray sheegashada Itoobiya.
" Hadalka Xabashida ee ah in ay qabteen xubno ka tirsan Mujaahidiinta waa arrin aan sal iyo raad lahayn, waa sheegasho siyaasadaysan oo uu taliska Abiy Axmad ku doonayo inuu indhaha caalamka uga leexiyo dhibaatada iyo colaadda ka taagan gudaha Itoobiya" Sidaas waxaa yiri Sheekh Cabdi Casiis Abu Muscab, afhayeenki Ciidamada Al-Shabaab.
"Ma jiro rag ka tirsan Mujaahidiinta oo ay Xabashidu qabteen, anaguna qayb kama nihin collaada ka dhex aloosan qawmiyadaha xabashida ah ee Itoobiya" ayuu hadalkiisa sii raaciyay Abu Muscab.
Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaal lagu riiqmay oo galay isbuucii labaad kaas oo u dhexeeya dawlada Federaalka oo kaashanaysa maleeshiyaatka Amxaarada oo dhinac ah iyo maamulka Tigreega ah ee fadhigiisu yahay waqooyiga Itoobiya.